सबैले मनाउने पर्व 'माघे संक्रान्ति', किन खाने घिउ, चाकु र तरुल ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सबैले मनाउने पर्व ‘माघे संक्रान्ति’, किन खाने घिउ, चाकु र तरुल ?
माघे संक्रान्तिमा घ्यू, चाकु, तिलको लड्डु, सख्खरका परिकार बनाएर खाइन्छ । यस्तै तरुल, सख्खरखण्ड, पिडालु लगायतका कन्दमुल (जमिनमुनी फल्ने खाद्यवस्तु) उसिने खाने चलन छ ।
माघे संक्रान्तिलाई गोरु जुधाउनने पर्वको रुपमा पनि मान्ने गरिएको छ। यस दिन नेपालका मध्ये पहाडी भेगमा विशेषगरी महत्वका साथ यस पर्व मनाउने गरिएको छ। नेपालको नुवाकोट धादिङ जस्ता जिल्लामा विशेषगरी सयौं हल गोरु जुधाएर सांस्कृतिक पक्षलाई अझ रोचकता थप्ने गरेका छन्।
रुपन्देही सामाजिक सञ्जाल अष्ट्रेलियाको पहिलो अधिवेशन सिड्नीमा सम्पन्न कृष्ण गैरे अध्यक्षमा चयन।
रुपन्देही सामाजिक सञ्जाल अष्ट्रेलियाको पहिलो अधिवेशन आज सिड्नि स्थित क्याम्सिमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको […]
यसरी जाँच्न सकिन्छ स्तन क्यान्सर
जेठ ३० । काठमाडौँ , मानिसमा देखिने क्यान्सरमध्ये आफैँ जाँच गरी पत्ता लगाउन सकिने क्यान्सर स्तन क्यान्सर हो […]
हिजो अस्तिको भन्दा आज धेरै पानी पर्ने, सतर्क रहन आग्रह
काठमाडाैँ । हिजो अस्तिको भन्दा आज धेरै पानी पर्ने मौसमविद्ले बताएका छन्। आज मध्य र पश्चिमको एक दुई ठाउँमा […]
ऋषि कपुरले पनि छाडेनन् आलियालाई
मुम्बई, बलिउड नायिका आलिया भट्टले ‘कफी विथ करण’मा भारतका राष्ट्रपतिको नाम नजानेपछि उनको बिषयमा हजारौ जोक्स […]
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भेटघाटमा व्यस्त
साउन १। काठमाडौँ, भारत भ्रमणमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार विभिन्न […]
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न अाज साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद बैठक बस्दै
काठमाडाैँ । लामो समयदेखि कायमुकायमको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको नाम […]